……အံမခန်းသတင်းထူးကြီးလားကွယ်တို့……… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ……အံမခန်းသတင်းထူးကြီးလားကွယ်တို့………
Posted by koyinmaung on Oct 12, 2013 in Copy/Paste |0comments
..ဖွဘုတ်ပေါ်မှာတွေခဲ့တဲ့ အံမခန်းသတင်းကြီးကို တို့ရွာသားများဘယ်လိုသဘောရှိကြမလဲသိချင်လို့ကူးတင်ပေးလိုက်ရပါတယ်….
ဇင် ဘာဘွေနိုင်ငံတွင် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများကို အုပ်စုဖွဲ့မုဒိမ်းကျင့်သည့် ကိစ္စများကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့မှာ ခေါင်းခြောက်နေကြောင်း သိရသည်။
လွန်ခဲ့သော ၁၁ လအတွင်း အမျိုးသား ၆ ဦးမှာ အမျိုးသမီးများက အုပ်စုလိုက် မုဒိမ်းကျင့်မှု ခံခဲ့ရသည်။
ရဲဌာနက ထိုကိစ္စအတွက် ရှက်ပြီး ရဲမတိုင်သော အမျိုးသားများလည်း ရှိနိုင်ကြောင်း သုံးသပ်ပြောကြားခဲ့သည်။
အသက် ၂၆ နှစ်ရှိ ရဲသားတစ်ဦးသည် ဘူလာဝါယိုတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် အသေးစား မီနီဘတ်စ်တစ်စင်းက အကူအညီတောင်းသဖြင့် သွားရောက်ခဲ့ရာ ကားထဲရှိ အမျိုးသမီး ၃ ဦးက ၎င်းအား ဝိုင်းချုပ်ခဲ့ကြသည်။
ယင်းသည် ရုန်းကန်ရန် ကြိုးစားသော်လည်း မျက်နှာကို မေ့ဆေးဖြင့် အုပ်ခံရပြီးနောက် သတိလစ်သွားကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ အကြီးအကဲ ဩဂက်စတင်းချီဟွာကဆိုသည်။ ထို့နောက် ထိုရဲသား သတိပြန်ရလာချိန်တွင် ၎င်းသည် မြို့ပြင်တောအုပ်ထဲ ရောက်နေပြီး အမျိုးသမီး ၃ ဦးက ယင်းကို လိင်ဆိုင်ရာ စော်ကားပြု မူနေသည်ကို သတိပြုမိခဲ့သည်။ ထို့နောက် စိတ်ကျေနပ်သွားသော အမျိုးသမီးများသည် ရဲသားတွင် ပါလာသော ငွေကြေးအနည်းငယ်နှင့် မိုဘိုင်းဖုန်းတို့ကို ရယူကာ ၎င်းအား မြို့ပင်တွင် ထားခဲ့ပြီး ထွက်ပြေးသွားကြောင်း ချီဟွာက ပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုသို့သော လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ပတ်သက်ပြီး အကြောင်းရင်းကို မသိရဟု ချီဟွာကဆိုသည်။
ဇင် ဘာဘွေ ဥပဒေအရ မုဒိမ်းမှုသည် အမျိုးသမီးများ ပြုကျင့်ခံရမှသာ အကျုံးဝင်ပြီး အမျိုးသားများအတွက် သတ်မှတ်မထားချေ။
ပြီးခဲ့သည့်လကလည်း အမျိုးသမီး နှစ်ဦးသည် အသက် ၄၄ နှစ်အရွယ် အမျိုးသား တစ်ဦးအား ၎င်းတို့နှင့် လိင်ဆက်ဆံရန် အတင်းခိုင်းစေခဲ့သည်။
ထိုစဉ်က ယင်းအမျိုးသားသည် အိပ်ယာတစ်ခုကို ဝယ်လာပြီး ကာရိုးအနောက်ပိုင်းရှိ နေအိမ်သို့ သယ်သွားချိန်တွင် အမျိုးသမီးများက ယခုလို ခိုင်းစေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယမန်နှစ် နိုဝင်ဘာလကလည်း အမျိုးသမီး ၂ ဦးသည် အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ် ချာတိတ်တစ်ဦးကို ဟာရာရာရှိ ရိုမန်ကက်သလစ် ဘုရားကျောင်းအတွင်း သော့ခတ်ပိတ်ကာ မုဒိမ်းကျင့်ခဲ့ကြသည်။ ယခုကဲ့သို့ ရဲသားတစ်ဦးအား မီနီဘတ်စ်ပေါ် လိုက်လာသည့် အမျိုးသမီးများက မုဒိမ်းကျင့်ခဲ့ကြောင်း သတင်းထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် ပြည်တွင်းသတင်းစာတစ်စောင်က လမ်းပေါ်မောင်းလာသည့် မီနီဘတ်စ်ကို အလုအယက် ဝိုင်းတားနေသည့် အမျိုးသား အမြောက်အမြားပုံကို ကာတွန်းရေးဆွဲ သရော်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
(ဇင် ဘာဘွေနိုင်ငံတွင် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများကို အုပ်စုဖွဲ့ မုဒိမ်းကျင့်သည့် ကိစ္စများကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့မှာ ခေါင်းခြောက်နေကြောင်း သိရသည်။ လွန်ခဲ့သော ၁၁ လအတွင်း အမျိုးသား ၆ ဦးမှာ အမျိုးသမီးများက အုပ်စုလိုက် မုဒိမ်းကျင့်မှု ခံခဲ့ရသည်။
ရဲဌာနက ထိုကိစ္စအတွက် ရှက်ပြီး ရဲမတိုင်သော အမျိုးသားများလည်း ရှိနိုင်ကြောင်း သုံးသပ်ပြောကြားခဲ့သည်။ အသက် ၂၆ နှစ်ရှိ ရဲသားတစ်ဦးသည် ဘူလာဝါယိုတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် အသေးစား မီနီဘတ်စ်တစ်စင်းက အကူအညီတောင်းသဖြင့် သွားရောက်ခဲ့ရာ ကားထဲရှိ အမျိုးသမီး ၃ ဦးက ၎င်းအား ဝိုင်းချုပ်ခဲ့ကြသည်။ ယင်းသည် ရုန်းကန်ရန် ကြိုးစားသော်လည်း မျက်နှာကို မေ့ဆေးဖြင့် အုပ်ခံရပြီးနောက် သတိလစ်သွားကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ အကြီးအကဲ ဩဂက်စတင်းချီဟွာကဆိုသည်။ ထို့နောက် ထိုရဲသား သတိပြန်ရလာချိန်တွင် ၎င်းသည် မြို့ပြင်တောအုပ်ထဲ ရောက်နေပြီး အမျိုးသမီး ၃ ဦးက ယင်းကို လိင်ဆိုင်ရာ စော်ကားပြုမူနေသည်ကို သတိပြုမိခဲ့သည်။ ထို့နောက် စိတ်ကျေနပ်သွားသော အမျိုးသမီးများသည် ရဲသားတွင် ပါလာသော ငွေကြေးအနည်းငယ်နှင့် မိုဘိုင်းဖုန်းတို့ကို ရယူကာ ၎င်းအား မြို့ပြင်တွင် ထားခဲ့ပြီး ထွက်ပြေးသွားကြောင်း ချီဟွာက ပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုသို့သော လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ပတ်သက်ပြီး အကြောင်းရင်းကို မသိရဟု ချီဟွာကဆိုသည်။
ဇင် ဘာဘွေ ဥပဒေအရ မုဒိမ်းမှုသည် အမျိုးသမီးများ ပြုကျင့်ခံရမှသာ အကျုံးဝင်ပြီး အမျိုးသားများအတွက် သတ်မှတ်မထားချေ။ ပြီးခဲ့သည့်လကလည်း အမျိုးသမီး နှစ်ဦးသည် အသက် ၄၄ နှစ်အရွယ် အမျိုးသား တစ်ဦးအား ၎င်းတို့နှင့် လိင်ဆက်ဆံရန် အတင်းခိုင်းစေခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က ယင်းအမျိုးသားသည် အိပ်ယာတစ်ခုကို ဝယ်လာပြီး ကာရိုးအနောက်ပိုင်းရှိ နေအိမ်သို့ သယ်သွားချိန်တွင် အမျိုးသမီးများက ယခုလို ခိုင်းစေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
( Myanmar News Update )
အသဲကြီး ရာဝဏဝေါမှ ကူးယူဖေါ်ပြသည်။
— with Wathone Dray and 18 others. )
— with Wathone Dray and 18 others.
ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံမှချောမောလှပသည့် အမျိူးသမီးများဟာ အုပ်စုလိုက်အဖွဲ့ ဖွဲ့ ပြီး အမျိူးသား
များအား ဖျားယောင်းမြှူ ဆွယ်ခေါ်ဆောင်ကာ ပျော်ပါးဆက်ဆံပြီးနောက် ဂျူ ဂျူ ဟုခေါ်တွင်
သည့် စုန်းကဝေဆိုင်ရာ၊ အောက်လမ်းနတ်ဆိုင်ရာပူဇော်ပသမှု များပြုလုပ်ရာတွင်အသုံးပြုရန်
၎င်းအမျိူးသားများ၏ သုတ်ရည်များအား ရယူစုဆောင်းလျှက်ရှိနေကြပါတယ်လို့ ဒေသဆိုင်ရာ
ဒေသခံအမျိူးသမီးတစ်ဦးဖြစ်သူ ဆူဆန်ဒလီဝါယို ကပြောကြားရာမှာ မကြာသေးခင်ကာလများ
က သူမအနေဖြင့် လမ်းဘေးတွင်ကားကြုံလိုက်စီးရန်တားနေသည့်အမျိူးသားများအား တင်
ဆောင်သွားရန် ကားရပ်ခဲ့ ပေမယ့် သူမကားပေါ်သို့ တက်လိုက်ရန်ငြင်းဆန်ခဲ့ ကြပြီး၎င်းတို့ 
အနေဖြင့် (အမျိူးသမီးများမှ) အဓမ္မပြုကျင့် ခြင်းခံရမည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ဆို
ခဲ့ ကြကြောင်း ဟုပြောကြားခဲ့ ပါတယ်…
အခုတော့ ယောကျာင်္းတွေက မိန်းမတွေကိုကြောက်နေရတဲ့ ခေတ်ဖြစ်နေပါပြီဗျာ…ကျွန်တော်
တို့ ခင်ဗျားကို မယုံလို့ ခင်ဗျားနဲ့ မလိုက်နိုင်ပါဘူးလို့ သူတို့ ကဆိုခဲ့ ကြောင်း အသက် ၁၉ နှစ်အ
ရွယ်ရှိ မစ္စဒလီဝါယို ကပြောခဲ့ ပါတယ်…အဆိုပါအချစ်နတ်သမီးလေးများ၏လမ်းကြုံတင်ခေါ်ကာ သေလုမျောပါးဖြစ်အောင်အချစ်ကြီးချစ်
ခံကြရသူများဟာ စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသည့် မူးယစ်ဆေးဝါးဖြင့် တိုက်ကျွေးခြင်းခံရခြင်း သို့ မ
ဟုတ် သေနတ်၊ ဓါးများဖြင့် ချိန်ကာ အဓမ္မကျင့် ကြံခြင်းခံကြရတာဖြစ်ပြီး အမျိူးသားတစ်ဦးဆို
လျှင် မုဒိန်းမယ်များက မြွေအရှင်ဖြင့် ပြကာချိန်းခြောက်ပြီး အနိုင်ကျင့် ခဲ့ ကြတာဖြစ်တယ်လို့ 
နိုဝင်ဘာလက ညီအစ်မသုံးဖော်နှင့် ၎င်းတို့ ၏ရည်းစားဖြစ်သူ အမျိူးသားတစ်ဦးတို့ အား လမ်း
ကြုံကားတားဆီးသူအမျိူးသားများအား ခြိမ်းခြောက်အနိုင်ကျင့် ကာ ထိုသူများ၏ သုတ်ရည်များ
အား ယစ်ဇ်ပူဇော်ရန်၊ အောက်လမ်းနည်းဖြင့် အစီအရင်များပြုလုပ်ရန်အတွက် စုဆောင်းသိမ်း
ဆည်းမှုဖြင့် ဟာရာရေး တရားရုံတွင် တရားစွဲဆိုခဲ့ ကြပါတယ်….
နိုခွာရယ ညီအစ်မများအားယာဉ်တိုက်မှုတစ်ခုတွင်၎င်းတို့ ၏ကားအတွင်းမှ အသုံးပြုထားသည့် 
ကွန်ဒွန် ၃၁ ခုအား ရဲတပ်ဖွဲ့ မှစစ်ဆေးတွေ့ ရှိခဲ့ ရာမှ သိရှိဖမ်းဆီးခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်…
အမျိူးသမီးမှ အမျိူးသားအား အဓမ္မကျင့် ၊ဗလက္ကာယပြုကျင့် ခြင်းဟာ ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံတွင်ပြစ်
မှုမမြောက်တာမို့ ထိုအမျိူးသမီးများအနေဖြင့် အင်အားသုံးကာ မဖွယ်မရာဆက်ဆံမှု ၁၇ ခုဖြင့် 
နတ်မိမယ်ညီအစ်မ ၃ ဖော်ကတော့ ၎င်းတို့ ဟာ ရိုးသားကြိုးစားသည့် ပြည့် တန်ဆာ၊ အပျော်
မယ်လေးများသာဖြစ်ပါတယ်လို့ အခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့ ကြပါတယ်…
” အဲဒီ ( အမျိူးသားသုတ်ရည်ကို ) ဟာကို ယဇ်ပူဇော်ခြင်း၊ အစီအရင်လုပ်ခြင်းတွေမှာအသုံးပြု
တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ သိကြပါတယ်…” လို့ ဇင်ဘာဘွေတက္ကသိုလ် လူမှုဗေဒပညာရှင် ရုပါ
ရန်ဂန်ဒါ ကဆိုပြီး ၎င်းအနေဖြင့် အမျိူးသားများရဲ့ သုတ်သွေးဟာ တန်ဖိုးရှိသည့် ၊ ဈေးကြီးသော
ဟာရာရေးမြို့ မှာလမ်းသူရဲလူငယ်များအား စီးပွားရေးသမားများက ဟိုတယ်အခန်းများ၊ အရက်
သေစာများ ထောက်ပံ့ ပေးကမ်းကာ ပြည့် တန်ဆာများအား ခေါ်ဆောင်ပြီး ( အိပ်စက်ပျော်ပါး
ကာ ) အသုံးပြုပြီးသော ကွန်ဒွန်များအားပေးအပ်ရန် စေခိုင်းခဲ့ ကြပါတယ်ဆို့ သတင်းများကဆို
ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံ၊ တိုင်းရင်းရိုးရာဆေးပညာအစည်းအရုံးကတော့ အဆိုပါ ကျင့် သုံးမှုအား စုန်း
ကဝေ ဆန်ဆန်ပြုကျင့် မှုဟု ဆိုကာ ဝေဖန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်….
“ဤကဲ့ သို့ လုပ်ရပ်မျိူးအား ကျွန်ုပ်တို့ အနေဖြင့် လုံးဝ ဆန့် ကျင်ပါတယ်…” လို့ လည်း ပြောရေး
ဆိုခွင့် ရှိသူ ဂျော့ ကန်ဒီဗာရို ကဆိုပါတယ်…
နိုခွာရ ညီအစ်မများအား ဖမ်းဆီးမိပြီးနောက်တွင်လည်း ထိုကဲ့ သို့ အမျိူးသားများအား အဓမ္မပြု
ကျင့် မှုများ လျော့ နည်းပပျောက်သွားခြင်းမရှိသေးပဲ ရဲတပ်ဖွဲ့ အနေဖြင့် မည်ရွေ့ မည်မျှဖြစ်
ပျက်ခဲ့ သည် ဆိုတာတောင် မှတ်သားထားခဲ့ နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ ကြောင်းဝန်ခံပြောကြားခဲ့ ပါတယ်…
” အဆိုပါအဖြစ်အပျက်များအမှန်တကယ်ဖြစ်ပွားကြောင်းအတည်ပြုနိုင်တဲ့ အရည်အတွက် အတိ
အကျ ကျွန်တော်တို့ မှာ မရှိပါဘူး…” လို့ နိုင်ငံတော်ရဲတပ်ဖွဲ့ ဆိုင်ရာပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူ ၀ိန်းဗူ
ဇီဂျီနာ က ပြောခဲ့ ပါတယ်…
ဇင်ဘာဘွေအမျိူးသားများအနေဖြင့် ယခုကဲ့ သို့ သုတ်ပိုးမုဆိုးမ များ၏ရန်မှရှောင်ရှားနိုင်ရန်
အများပြည်သူသုံးဘတ်စ်ကား၊ရထားများအားအသုံးပြုပြီး ခရီးသွားလာကြပါရန်တိုက်တွန်းပြော ……….
…ဒီကိစ္စကို ကျုပ်တို့နှူ ဘာဂိုဏ်သားတွေကို သွားရှင်းခိုင်းလိုက်ရယင်တော့လား….ဟင်းဟင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး